Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 10/06/2019
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 10/06/2019
Coordination meeting of Committee for Supporting Peace and Stability in Rakhine State is held
Naypyitaw June 7
The Committee for Supporting Peace and Stability in Rakhine State held its 3rd coordination meeting in Nay Pyi Taw on7June 2019.
The committee’s Chairman U Aye Tha Aung said the committee will be conducting another ground observation trip soon. He urged everyone to consider the current armed conflicts and preparations for their next observation trip. Furthermore, he said they will be soliciting suggestions and conclusions from local residents and people are involved in or have experience with Rakhine State’s armed conflicts and peace process during the upcoming trip.
Next, the committee’s members discussed about current conflicts in Rakhine State, the upcoming observation trip, peaceful coexistence between two communities, and reducing armed conflicts in the area.
ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီ၏ တတိယအကြိမ်မြောက် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဇွန်လ ၇ ရက်တွင် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌက မိမိတို့ ကော်မတီအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ထပ်မံနယ်မြေ ကွင်းဆင်းလေ့လာသွားရန် ရှိပါကြောင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ထပ်မံသွားရောက်မည့်ခရီးစဉ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် လတ်တလော ဖြစ်ပွားနေသည့် လက်နက်ကိုင်ပဋိက္ခနှင့် အခြေအနေအရပ်ရပ် ကို ဆွေးနွေးတင်ပြကြစေလိုပါကြောင်း၊ ယခုတစ်ကြိမ် ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ သွားရောက်သည့်အခါ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသည့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခအခြေအနေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ အတွေ့အကြုံရှိသူများ၊ ပါဝင်ပတ်သက်သူများနှင့် ဒေသခံများ၏ အကြံပြုသုံးသပ်ချက်များ၊ ဖြစ်စဉ်အကြောင်းအရာအများကို ရယူသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များက လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အခြေအနေ အရပ်ရပ်နှင့် ထပ်မံကွင်းဆင်းလေ့လာ ဆောင်ရွက်သွားမည့်အခြေအနေ၊ နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအကြား သဟဇာတဖြစ်ရေးနှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိက္ခများ လျော့နည်းသွားရေးအတွက် ဆောင်ရွက် သွားရမည့် ကိစ္စရပ်များကို ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။